Nderupi ruzivo rwandinoda kuti ndive nekubudirira e-commerce saiti? ECommerce nhau
Nderupi ruzivo rwandinoda kuti ndive neanobudirira e-commerce saiti?
Dhiraivha uye uve ne e-commerce saiti Izvo hazvisi nyore zvachose, kune makuru e-commerce saiti panguva ino kuti kuenda kumberi uye uwane yakanaka sosi yemari inoda mazana evashandi kuti varambe vari pamusoro, zvisinei, hazvigoneke kubata uye kuve ne e-commerce. saiti. -Commerce iyo iwe wega yaunogona kubata, zvisinei, pane akati wandei zivo yakakosha iwe yaunofanirwa kuve nayo kuitira kuti yako saiti ibudirire. Tevere, isu tichatsanangura kuti chii ichi ruzivo uye nei uchifanira kuve nacho kuti usvike kwachiri Iva nenzvimbo yakabudirira.
2 Dhizaini yewebhu
Programming ndechimwe chinhu chakakosha iwe chaunofanirwa kugara uchifunga mupfungwa dzako kana uchida kuva neimwe yemasaiti aya, uye kana iwe uchida kuti vashande zvinobudirira, unofanirwa kuve neruzivo rwekutanga rwezvirongwa, iwe unofanirwa kuziva macomputational algorithms kuti ugone kupa sevhisi yakanaka kune vatengi vako.
Izvi zvakabatana zvakanyanya nekuronga sezvo vaviri vari muhurongwa hwakafanana pamhepo, zvichiita kuti peji rako rikwezve kune vashandisi vanorishanyira kwakakosha, nekuti kana vakaona kuti peji racho rinokwezva kune ziso, ivo vacharamba vachiongorora ichi neicho inovhura mikana yakawanda yekutenga pawebhusaiti yako.
Kuve neruzivo rwekutanga rwekuti ungasimudzira sei webhusaiti yako kwakakosha, unoda vamwe vashandisi kuti vashanyire saiti ino kuti uwane purofiti, asi izvi zvichaitika sei kana iwe usina ruzivo urwu. Ziva kupi uye sei kutanga a marketing campaign Izvo zvakakosha kwazvo, kunyanya kana tichitaura nezve kushambadzira kwepamhepo izvo mazuva ano zvinokwikwidza.
Idzi ndidzo nzvimbo shoma dzeruzivo dzaunofanirwa kuchengeta mupfungwa kana uchiita sarudzo yekuvhura yako e-commerce saiti, inogona kunge iri basa rakawanda, asi pakupedzisira inounza mabhenefiti mazhinji.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Marketing » Kutengeswa kweIndaneti » Nderupi ruzivo rwandinoda kuti ndive neanobudirira e-commerce saiti?
Amazon inowana chikafu chikafu "Zvese Zvekudya"